वैद्य र विप्लवसहित अन्य वामपन्थी पार्टीबीच एकताको प्रयास, कहाँ पुग्दैछ एकता अभियान ? समाचार
काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकताको प्रयास लामो समयदेखि नै भईरहेको छ । पछिल्लो समय बैद्य र विप्लवसहित विभिन्न २१ राजनीतिक संगठनहरुले कार्यगत एकताको घोषणा गरेसँगै त्यो चर्चा बढेको थियो ।
२१ राजनीतिक संगठनहरुले कार्यगत एकताको घोषणा गर्दै गर्दा तत्कालै संयुक्त मोर्चा बनाउने छलफल पनि चलाएका थिए । कार्यगत एकतासँगै उनीहरुले साझा मुद्दामा प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौताको खारेजी, भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि छानबिन, कोभिड उपचार निःशुल्क र बेरोजगारलाई रोजगारीलगायतका विषयमा राजनीतिक संगठनहरुले संयुक्त प्रदर्शन गरेका थिए । तात्कालीन मुद्दाहरुमा गरिएको प्रदर्शनलाई सबैले सद्भाव पनि राखेका छन् ।
नीतिगत एकरुपता हुनेबीच तत्कालै एकताको पहल
कार्यगत एकता गर्नेमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, रविन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (बोल्शेविक), सिपि गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, लोककृष्ण भट्टराई नेतृत्वको पुष्पलाल अध्ययन समाजलगायत छन् । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपि गजुरेलका अनुसार विभिन्न २१ राजनीतिक संगठनबीच कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकतासम्मको लागि वार्ताहरु भईरहेका छन् ।
उनका अनुसार मुख्यतः तत्कालको लागि संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘भर्खरै कार्यगत एकता गरेका छौं, अब क्रान्तिकारी विचारमा आधारित संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि जाऔं भनेर छलफल चलिरहेको छ’, गजुरेलले भने, ‘ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगेको छैनौं तर, छलफल अत्यन्तै सकारात्मक दिशातिर छ ।’
उनका अनुसार नीतिगत रुपमा भिन्न दृष्टिकोण नराख्ने पार्टीहरु बीच तत्कालै एकताको लागि पहल भईरहेको छ । ‘कार्यगत एकता गर्दैगर्दा नीतिगत एकता हुनेबीच एकता गरिहालौं भन्ने पनि छ, हामी त्यस्तो प्रर्यत्नमा छौं, यदि गर्न सके नेपालको वास्तविक कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकाकार गराउन सहयोग पुग्थ्यो’, गजुरेलले भने ।
गजुरेलले बताएअनुसार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य पूर्वमाओवादी घटकका पार्टीबीच भने तत्कालै एकता हुने सम्भावना छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय विप्लवसहित विभिन्न पूर्वमाओवादी घटकबीच संयुक्त र बेग्लाबेग्लै छलफल चलिरहेको छ ।
पूर्वमाओवादी घटकहरु बीचको एकताप्रति चाँसो
१० वर्षे जनयुद्व लडेको तत्कालिन नेकपा माओवादी अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ । तत्कालिन माओवादीको मुख्य घटक (नेकपा माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले सत्तारुढ नेकपामा छन् । तत्कालिन माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेता मध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराई क्षेत्रीय स्वरुपको जनता समाजवादी पार्टीमा छन् ।
मोहन वैद्य, विप्लव र गोपाल किरातीलगायतका नेताहरु भने बेग्ला–बेग्लै संगठनहरुको नेतृत्वमा छन् । यसरी माओवादी आन्दोलनमा सहभागी पार्टीहरु मात्रै दर्जनको हाराहारीमा छन् ।
जनयुद्व लडेका पूर्वमाओवादी घटकबीच जनयुद्वमै सरिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकता होस् भन्नेमा छन् । नेता गजुरेलका अनुसार आफुँहरु र विप्लवसहित अन्य पूर्वमाओवादी घटकबीच छिट्टै एकता हुने सम्भावना बढि छ ।
‘हामीबीच नीतिगत एकरुपता छ, कार्यशैलीमा केहि भिन्नता भएपनि त्यो मिलाउन मिल्छ, हाम्रो प्रर्यत्न पूर्वमाओवादी घटकबीच तत्कालै एकता होस् भन्ने तिर पनि छ, जसमा सत्तारुढ पार्टीभित्र रहेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता पनि सहभागी हुन सकुन’, गजुरेलले भने ।
विप्लवसँगको एकता यसअघि पार्टी प्रतिबन्धका कारण रोकिएको गजुरेलले बताए । ‘हामी करिब एकतामा सहमत भईसकेका थियौं, एकाएक प्रतिबन्ध लागेसँगै एकता प्रक्रिया रोकियो’, गजुरेलले भने, ‘सायद प्रतिबन्ध नलाएको भए र उहाँहरुको कार्यशैली परिवर्तन नभएको भए पार्टी एकता भईसक्थ्यो, त्यो एकताले राम्रो सन्देश पनि जान्थ्यो ।’